अफगान असफलता- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
असार २१, २०७६ हिमेश
अन्ततः अफगानिस्तान विश्वकप क्रिकेट २०१९ को चुत्थो टिम सावित भयो  । यसपल्टको विश्वकपमा छनोटका लागि दुई स्थान उपलब्ध थियो, त्यसबाट छानिने दुई टिम थिए— अफगानिस्तान र वेस्ट इन्डिज  ।
संयोगले यिनै दुई टिम नै पुछारतिर रहे । अफगानिस्तान त वेस्ट इन्डिजभन्दा पनि पछाडि रह्यो । जस–जसले वान–डे क्रिकेटको विश्वकपमा धेरै टिम हुनु हुन्न भन्छन्, उनीहरूका लागि चिताएजस्तै नतिजा हो ।
नत्र ज–जसले वान–डे विश्वकपमा बढीमा १६ टिम हुनुपर्छ भन्छन्, त्यसका लागि यो खराब नतिजा हो ? विशेषतः जसरी अफगानिस्तानले यो विश्वकप खेल्यो, त्यो वास्तवमै निराशाजनक रह्यो । वेस्ट इन्डिजभन्दा पनि अफगानिस्तानको खेलमा हाम्रो रुचि हुनु स्वाभाविक नै हो । यो त्यही टिम हो, जसले नेपाली क्रिकेटको नाकमुनिबाटै लोभलाग्दो प्रगति गर्‍यो र हामी हेरेको हर्‍यै भयौं । हामीले ईर्ष्या मात्र गर्न सक्यौं । अब त हामीले अफगानिस्तान क्रिकेटलाई छुन पनि गाह्रो हुन सक्छ । यही टिमले विश्वकप खेलिरहेका अरू टिमलाई भने छुन सकेन । यस्तो किन भयो त ?
उत्तर खोज्न प्रयास सुरु भएको छ र यसका केही कारण पनि देखिन्छन् । पहिलो ठोस कारण हो, कम अनुभव । अफगानिस्तानले विश्वकप क्रिकेटको माथिल्लो स्तरमा खेल्न थालेको धेरै भएको छैन, खालि केही वर्ष न हो । यसबीच उसले केही सम्झनयोग्य जित पनि निकाल्यो । यसमध्ये अधिकांश जित आफूभन्दा मुनिकै थिए, आयरल्यान्डजस्ता टिम । अफगानिस्तानले २०१५ को विश्वकप पनि खेलेको थियो, त्यति बेला प्रतियोगिताको ढाँचा नै बेग्लै थियो । यसपल्टको विश्वकपमा सहभागी १० टिममध्ये सबैले सबैसँग खेल्नुपर्छ । यही कारणले अफगानिस्तानी क्रिकेट पनि वास्तविक परीक्षाबाट गुज्रियो, अनि थाहा भयो– अफगान क्रिकेटले सिक्नुपर्ने त अझै धेरै रहेछ, गर्न बाँकी धेरै रहेछ ।
अफगानिस्तानले यति ठूलो प्रतियोगितामा यति धेरै खेल यसअघि कहिल्यै खेलेकै थिएन, त्यो पनि सबै आफूभन्दा माथिका टिमसँग । सीधा सीधा भन्दा अफगानिस्तानको क्रिकेट स्तर अझै कमजोर नै छ । यसले जे जति चर्चामा रहन जित निकालेको थियो, त्यो आफू जत्तिकै टिमविरुद्ध थियो, होइन भने आफूभन्दा कमजोर नै । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) का लागि लेख्दै अफगानिस्तानका पूर्वखेलाडी मिर्वाइस असरफले भनेका छन्, टिममा यति ठूलो प्रतियोगिता खेल्ने अनुवभ नै थिएन । उनको ठहर थियो, ‘विश्वकपमा अफगानिस्तानले केही राम्रो गर्छ भन्ने अपेक्षा छ भने त्यसका लागि पर्याप्त अनुभव चाहिन्छ । सबैले के बुझ्नुपर्छ भने विश्वकपमा अफगानिस्तानले गरेका सबै टिम अब्बल दर्जाका हुन् । यी टिमविरुद्ध खेल्नु कहिले पनि सजिलो हुन्न । त्यसैले विश्वकपजस्तो प्रतियोगिताबाट अफगानिस्तानले रातारात केही गर्छ भनेर अपेक्षा धेरै गर्नु हुन्न ।’ हुन पनि बंगलादेशजस्तो टिमलाई अहिलेको स्तरसम्म पुग्न पनि धेरै समय लाग्यो ।
अफगानिस्तानका लागि तीन वर्षअगाडि अन्तिम पटक खेलेका असरफ के पनि मान्छन् भने विश्वकप ठूलो शिक्षाका रूपमा रह्यो । त्यो अर्थमा लगभग सबै हारेर पनि सबैभन्दा ठूलो विजेता रह्यो, अफगानिस्तान नै । एउटै प्रतियोगितामा सबै माथिल्लो वरीयताका टिमसँग खेल्नु पाउनु भनेको अफगानिस्तानका लागि भाग्य पनि हो । असरफकै भाषामा अफगानिस्तानले इंग्लिस भूमिमा जे जत्ति खेल्यो, त्यसमा गर्व गर्दा नै हुन्छ, त्यसले पछि काम गर्नेछ । यी त भए, पर्दाअगाडिका कुरा । पर्दापछाडिका विवाद र कलहले पनि टिमको प्रदर्शनका निकै खराब प्रभाव पार्‍यो । सबैलाई के राम्रोसँग थाहा छ भने अफगानिस्तानको क्रिकेटमा पनि फोहोरी राजनीति चल्छ । यही राजनीतिकै कारण त्यहाँका खेलाडी पनि दुई अलग र विरोधी धारमा विभाजित हुन्छन् । विवाद र कलह नहुँदो त अफगानिस्ताको प्रदर्शन वास्तवमै यति कमजोर हुने थिएन । कम्तीमा सायद केही खेल त जित्थ्यो नै ।
विश्वकप सुरु हुन ठीकअगाडि नै अफगान क्रिकेट एउटा नचाहिंदो विवादमा फस्यो । विश्वकप सुरु हुन दुई महिना मात्र बाँकी थियो, त्यहाँको क्रिकेट बोर्डले नयाँ कप्तान नियुक्त गर्‍यो, गुलबदिन नइबका रूपमा । विश्वकपअगाडि धेरैले अचम्म मानेका पनि हुनुपर्छ, आखिरमा यी नइब हुन् को ? यसअघिका कप्तान थिए, असघर अफगान । यिनी भने सबैले चिनेका खेलाडी हुन् । त्यसैले उनको नाम आउँदा लाग्थ्यो, यी असली कप्तान हुन् ।
हुन पनि अफगानिस्तानले गम्भीर रूपमा क्रिकेटमा प्रगति गरेको यिनकै नेतृत्वमा हो । त्यसै क्रममा अफगानिस्तानले पछिल्लो एसियाकपमा बंगलादेश र श्रीलंकालाई पनि हरायो । अझ भारतविरुद्धको एक खेल टाईसमेत भयो । असगर कति आत्मविश्वासी कप्तान थिए भने उनलाई तीन खेलाडीमा खुबै विश्वास थियो र तीनै जना स्पिनर थिए, रसिद खान, मुजिब उर रहमान र मोहम्मद नाबी । उनी केसम्म भन्थे भने यी तीन खेलाडी छन् भने जस्तै स्कोरको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यही बेला रसिद भन्थे, ‘विश्वकपको ठीकअगाडि कप्तान फेरिनु राम्रो होइन । यसले टिमको प्रदर्शनमा फरक पार्छ । असघर नै कप्तान रहनुपर्थ्यो ।’ नाबीले पनि त्यसमा होमाथि हो थपे । सबैको एउटै राय थियो, कप्तान नै फेरिनु थियो भने विश्वकपपछि गरे भइहाल्थ्यो नि । विश्वकप सुरु हुनुअगाडि पुराना प्रशिक्षक कबिर खानले पनि ठोकुवा गरेका थिए, हेर्दै जाऊ, कप्तान परिवर्तन गरेको कारणले टिमको प्रदर्शनमा नकारात्मक असर पर्छ ।
अझ उनले केसम्म भने भने यो सबै परिवर्तन राजनीतिक कारणले हो । विश्वकपको लिग चरणका खेल समाप्त हुने क्रममा यी सबै दाबी सही ठहरिएका छन् । नइब खासमा कच्चा खेलाडी नै हुन्, कच्चा खेलाडी कच्चा कप्तान हुने भए नै । अफगानिस्तान यसपल्ट दुई अवसरमा जितको नजिक पुगेको थियो, एक पल्ट भारतसँग, दोस्रो पल्ट पाकिस्तानसँग । विशेषतः पाकिस्तानविरुद्धको खेल त धेरै लामो समय अफगानिस्तानकै पकडमा थियो ।
खेलको निर्णायक मोड रह्यो ४६ औं ओभरमा । यसअघि नाबी, रहमान र खानले पाकिस्तानलाई संघर्ष गर्न बाध्य पारेका थिए । पाकिस्तानलाई त्यस स्थितिमा सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न निश्चित जित आवश्यक थियो । खेलको ४५ ओभर सकिंदा चार विकेट हातमा रहेको स्थितिमा पाकिस्तानलाई ३० बलमा ४६ रन चाहिएको थियो । लगत्तै अर्को ओभरमा खेल नाटकीय रूपमा पाकिस्तानको पक्षमा मोडियो ।
इमाद वासिमले त्यस नइबको त्यस ओभरमा तीन चौका प्रहार गरे । अझ नइबले एक बल वाइड पनि फाले । त्यसयता पाकिस्तानलाई २४ बलमा २८ रन चाहिएको स्थिति तयार भयो र टिम थप दबाबमा आएन । नइबले ९.४ ओभरमा कुनै विकेट लिन सकेनन् र उल्टै ७३ रन खर्चे । पछि नइबले आफैंले बलिङ गर्नुपर्ने कारणको बचाउ गर्न नाटक पनि गरे । तर कसैले पत्याएनन् । सबैले माने, अफगानिस्तान हार्‍यो किनभने नइबले राम्रो गर्न सकेनन् ।
केही समय भयो, अफगानिस्तानमा बोर्ड र खेलाडीबीच झगडा सुरु भएको । बोर्डले यही निहुँमा अफगान क्रिकेटलाई सफा गर्नु पर्छ भनेर नयाँ नयाँ नियुक्त गरे, बोर्डको नेतृत्वदेखि खेलाडीको नेतृत्वसम्म । अहिले अफगान क्रिकेटमा ठ्याक्कै दुई समूह छ, त्यही परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने बोर्ड र त्यसमा फरकमत राख्ने सिनियर खेलाडीको समूह । यसै कारण टिममा चर्को बेमेल छ । अब यस्तो कलह चलिरहेको टिमबाट विश्वकपमा कसरी ठूलो अपेक्षा राख्नु ?